Nivoaka ny fonja, afakomaly alina, ny mpanorina ny Master’s, Ramaroson Alain. Voalaza ho anton’izany ny fahavitan’ny saziny teny Antanimora, nandritra ny 30 volana mahery. Tsiahivina fa efa nivoaka ny fonja, tahaka izany koa, efa am-bolana maromaro izao, Ratsiferana Hugues, voarohirohy amin’ny famoahana ny entam-panjakana teny Ambohitsorohitra.
Nilatsaka, afakomaly, ny didim-pitsarana ho an-dRazaimamonjy Claudine. Voasazy hiasa an-terivozona mandritra ny fito taona sy fandoavana lamandy mitentina 100 tapitisa Ar ity mpandraharaha ity. Niakatra ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) 67 ha ny tenany, afakomaly. Mbola misy vesatra efatra hafa iampangana azy koa anefa, ankoatra izany.
Misy dikany ny dian’ny Amerikanina tetsy Ambohidahy. Noraisin’ny filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean Eric, ny masoivohon’i Etazonia, miasa sy monina eto amintsika, i Pelletier, sy ny mpanolotsaina misahana ny raharaha politika sy toekarena, i Julia Jacoby. Tsy nisy nipika ny dinika nefa tombanana fa anisan’ny voaresaka ny momba ny lalàna mifehy ny mpanohitra eto amintsika. Nampahafantarina tamin’izany koa ny andraikitra sahanin’ny HCC.
Nofidin’ireo depiote Tim miisa 16 ho lehiben’ny mpanohitra Ravalomanana Marc, araka ny fifidianana notontosaina teny amin’ny foiben’ity antoko ity eny Ankadivato, ny 19 aogositra teo. Natrehina sy nohamarinin’ny vadintany ny fanatanterahana ary narahina fitanana an-tsoratra ara-panjakana io fifidianana io. Nohamafisin’ny vadintany, Andriatsima Ravelo Heriniaina, fa araka ny lalàmpanorenana sy ny lalàna izany. Efa neken’ny antoko miisa 21 ho filohan’ny Rodoben’ny mpanohitra ho amin’ny demokrasia (RMDM) rahateo izy.